Ikamelo Lokuphumula Lase-Grampians 1a - I-Airbnb
Ikamelo Lokuphumula Lase-Grampians 1a
Ikamelo e-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ibungazwe ngu-Kerryn
U-Kerryn uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Uyemukelwa e-Grampians Retreat indawo eseceleni ebekwe kwenye yezindawo ezinhle kakhulu zase-Victoria, e-Australia.
I-Grampians Retreat ibekwe phansi kweMount Abrupt (Murdadjoog) intaba ephakeme kunazo zonke engxenyeni eseningizimu yeGrampians National Park (Geriwerd). Ihlala kumahektha angama-80 wamafulethi omfula kanye nehlathi lemvelo. Ungakwazi ukuzulazula phakathi kwama-gum giants abomvu eduze kwama-kangaroo, ama-wallabies, ama-echidnas, ama-emus, izilwane zezinyoni nezinye izilwane zasendle zase-Australia.
I-Grampians Retreat iyindawo yokuhlala yeqembu eyisisekelo nelula ehlinzekela izikole, amakamu okufunda nge-ecology kanye namaqembu amakhulu. Iphinde ibe nendawo yokukhempa emaflethini omfula, okuhlanganisa nomlilo omkhulu wekamu.
Inamakhabethe ama-en-suite amane atholakala kumaqembu amancane, imindeni, imibhangqwana noma abantu abangashadile, ezungezwe ihlathi lemvelo, amaflethi amahle emifula, izintaba ze-magestic kanye nomculo wezinyoni omnandi. Impahla ethandwa kakhulu, enomuzwa wokwamukela.
Amakhabethe anikeza indawo yokuhlala eyisisekelo, ehlanzekile. Anethezekile futhi anethezekile anemibhede emikhulu, ukufudumeza, ukupholisa (izifeni kuwo wonke amagumbi, i-aircon egumbini elingu-1a kuphela) kanye ne-en-suite.
Uma ubhukha igumbi elokubhukha kwakho ngokuphelele. Akekho omunye ozokwabelana ngegumbi/ikhabethe lakho.
Igumbi 1 - Kulala imibhede engu-6 - 6 (amasethi ama-3 wamabhedi)
Igumbi 1a - Ukulala 2 - imibhede yabantu abangabodwa, i-TV, igumbi lokugezela elifinyeleleka kalula, i-microwave, ifriji yebha.
Ikhabethe 11 - Kulala imibhede engu-9 - 8 (amasethi ama-4), umbhede owodwa ongu-1
Ikhabethe 12 - Kulala 9 - 1 umbhede wendlovukazi, umbhede ongashadile ongu-1, imibhede eyi-6 (amasethi ama-3 wamabhedi).
Uzokwazi ukufinyelela ezikhungweni zasekhishini eziziphekele kahle ezikhona kule ndawo, ngaphakathi kwegumbi lokungcebeleka elikhulu elinosofa, i-TV, imidlalo kanye ne-heater ebaswa ngokhuni, nezinkuni ezinikeziwe.
Kukhona ichibi lokubhukuda elishiswe yilanga, izindlela zokuhamba endaweni, amathrekhi wamabhayisikili asezintabeni, izinhlobonhlobo zezitshalo nezilwane ezithakazelisayo kanye nokufinyelela ku-Piccaninny kanye ne-Mt Abrupt ukuhamba imizila ukusuka endaweni.
Idolobhana elihle laseDunkeld liqhele ngemizuzu emi-5 futhi linezindawo zobuciko, ikhofi elimnandi, amathilomu amahle, ibhikawozi elineminyaka engu-150 ubudala, indawo yokuthenga yezitolo, iDunkeld Arboretum kanye nezindawo zokudlela ezimbili ezidumile zeRoyal Mail Hotel, lapho bangavakashela futhi ingadi yabo yasekhishini noma baklomelise ngokuwina i-cellar yamabhodlela engu-25,000.
I-Halls Gap iyibanga elifushane, enhliziyweni ye-Grampians, enemisebenzi eminingi yemindeni, kuhlanganise ne-Hall Gap Zoo, izimpophoma ezimangalisayo, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngezikebhe neminye imisebenzi eminingi.
Itholakala ngemuva kwezintaba ezinhle ze-Grampians ingenye yezindawo zewayini ezingokomlando nezidume kakhulu e-Australia. Ikhiqiza iwayini elisezingeni eliphezulu kusukela ngeminyaka yawo-1860s, lesi sifunda sinengxube emangazayo yezindawo zewayini ezinkulu nezinezitolo ezizungeze amadolobha aseGreat Western, Ararati, Buangor, Moyston kanye neHalls Gap.
Kusukela kumawayini akhazimulayo adumile kuya kusiginesha yesifunda i-Shiraz, i-Pinot Noir kanye ne-Dolcetto, amawayini abo awine imiklomelo awasho lutho olumangalisayo. Ngakho-ke thatha isikhathi sokunambitha, ukuthola kanye nokuthokozela indawo yewayini yaseGrampians - iminyango yegumbi labo elingaphansi ivuliwe futhi ilindile!
Siyayithanda i-Grampians Retreat futhi sijabulela ukungeza ukuthinta komuntu siqu ukuze kuzwakale njengekhaya kude nasekhaya. Uzojabulela futhi nezilwane zasendle ezivakashelwayo zasendaweni, kanye nokubukwa okuhle kweMount Abrupt kusukela kule ndawo kanye nehlathi elinokuthula, elihlinzeka ngendawo ekhethekile enganikezwa yimvelo kuphela.
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuzijabulisa, umoya omusha, ukubuyela emvelweni, ukuthula, ukuzindla, ukuzijabulisa komndeni noma indawo nje yokuphumula, vusa izinzwa zakho futhi ujabulele impilo eyethuliwe - The Grampians Retreat way
My name is Kerryn and I'm from Sydney, Australia. I'm a professional in the not for profit sector with a passion for travel, art, music, photography and life! I love the water, na…
Sihlala kule ndawo futhi ngenkathi sigcina ibanga lethu ukuvumela ubumfihlo bezivakashi, siyatholakala lapho sidingeka.